အလုပ်ရှာမည် | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
4 ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးဝင်သော tool များကို
6 အမေရိကရှိဒုက္ခသည်တစ်ဦးသို့မဟုတ်လူဝင်မှုအဖြစ်သင့်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုရှာဖွေခြေလှမ်းများအားလုံးအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့သင့်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုရှာဖွေခြောက်လလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပေးချက်များ. သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးထဲကအများဆုံး Making: သင်ဘယ်လိုအမေရိကတိုက်၌သင်တို့၏စုံလင်သောအလုပ်ရှာရမလဲ? အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း